संसारकै अनौठो बोका: दिनहुँ दुध दिने ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
संसारकै अनौठो बोका: दिनहुँ दुध दिने !
Published : 28 July, 2020 1:30 pm
तर जब बोकाले दुध दिन थाल्दछ, तब त्यो दुनियाकै आठौँ आश्चर्य नबन्ने कुरा भएन । यस्तो अकल्पनीय घटना भारतको राजस्थानमा भएको छ । राजस्थानको धौलपुर जिल्लास्थित गुर्जामा एकजना किसानले घरमा पालेको एउटा बोकाले दिनहुँ दुध दिने गरेको छ । बोकाबाट दुहेको दुधलाई उसका मालिकले निकै स्वाद मानेर पिउने गरेका छन् ।